ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ၏ အလွန်ထူးခြားတဲ့ သေတမ်းစာ… - Amawpyay
ဦးဇင်း သေရင် တော့…မျက်ကြည်လွှာ တို့ နှလုံး ၊ အသည်း ၊ကျောက်ကပ် စတဲ့အတွင်း ကလီစာတို့ ၊.တခြား အစားထိုးကုသလို့ရတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတို့ ၊ သုံးလို့ရတာတွေကို လိုအပ်တဲ့ လူနာတွေ အတွက် ခွဲဝေပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လက်ဆစ်တစ်ဆစ် လိုလည်း လက်ဆစ်တစ်ဆစ် ၊ အကြောတစ်မျှင် လိုလည်း အကြောတစ်မျှင် လိုရာဖြတ်တောက်ယူုပြီး သုံးကြပေါ့။
လူနာတွေ အတွက် သုံးလို့ရသမျှ အကုန်လုံး ဖြတ်တောက်ယူပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ကျန်နေတဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ဂုန်နီအိတ်ထဲထည့် ၊ ကျောက်တုံးတွေပါ ထည့်ပြီး ပင်လယ်ထဲ သင်္ဘောနဲ့ သယ်သွား ၊ ခပ်ဝေးဝေး ရောက်တာနဲ့ ရေထဲပစ်ချပြီး ငါးစာကျွေးလိုက် ပါလို့ ဒကာရင်းတွေ ၊ တပည့်ရင်းကလေးတွေကို သေချာမှာ ထားပါတယ်။
ဘဝ တစ်သက်တာမှာ ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ ငါးတွေတော်တော် များခဲ့ပြီ။ ကိုယ့်ကိုလည်း ငါးတွေ တစ်လှည့်ပြန်စား ပါစေဦး။
မီးရှို့၊ ပြာချပြီး အလကားပျောက်သွားမယ့် အတူတူ ပင်လယ်ထဲက ငါးတွေစားရတော့ ငါးတွေအတွက် အကျိုးရှိ တာပေါ့။ ကိုယ်ကုသိုလ်ရဖို့ ရည်ရွယ်လုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်လည်း ကုသိုလ်ရ သွားတာပဲ ဒါနကုသိုလ်။
ကိုယ်သေသွားရင် ကိုယ်မှာ ထားတဲ့ အတိုင်း ကျန်ရစ် သူတွေ လုပ်မလုပ် မသေချာပေမယ့် ကိုယ့်စေတနာ၊ကိုယ့်မေတ္တာကတော့ ဒီအတိုင်းပဲ တစ်သက် မတ်တည်း ရှိတဲ့ အတွက် ဒီကိစ္စကို သတိရ လိုက်တိုင်း ကိုယ်ကတော့ မသေခင် ကတည်းက ပုဗ္ဗစေတနာနဲ့ (ရှေ့ဦးစေတနာ၊တင်ကြိုစေတနာနဲ့) ကုသိုလ် ရနေတော့တာပါပဲ။
ဂုန်နီအိတ်က အပေါက်ပါတဲ့ ဂုန်နီအိတ်တော့ ဖြစ်ရမယ်။
ကြက်သွန် ထည့်တဲ့ ဂုန်နီအိတ် မျိုးပေါ့။ ဒါမှ ငါးတွေ စားလို့ အဆင်ပြေမှာလေ။ ဆာလာအိတ်တို့ ၊ ပလက်စတစ်အိတ်တို့ ဆို ငါးတွေစား မရဘဲ ဖြစ်နေ လိမ့်မယ်။ အနံ့ရလို့ ထိုးရင်လည်း ပါးစပ်တွေ နာနေမယ်။
ဒါ ဦးဇင်းရဲ့ သေတမ်းစာ ထဲက အချက်အလက် တစ် ခုပေါ့နော်……….
အရှင်ဆန္ဒာဓိက (အသေလှတဲ့သူ) တရားစာအုပ်မှ ကူးယူေ ဖ်ာပြ ပါသည်။
အားလုံးသော မိတ်ဆွေများ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
ဆရာတျော အရှငျဆန်ဒာဓိက ၏ အလှနျထူးခွားတဲ့ သတေမျးစာ…
ဦးဇငျး သရေငျ တော့…မကျြကွညျလှာ တို့ နှလုံး ၊ အသညျး ၊ကြောကျကပျ စတဲ့အတှငျး ကလီစာတို့ ၊.တခွား အစားထိုးကုသလို့ရတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတို့ ၊ သုံးလို့ရတာတှကေို လိုအပျတဲ့ လူနာတှေ အတှကျ ခှဲဝပွေီး အသုံးပွုလိုကျပါ။
လကျဆဈတဈဆဈ လိုလညျး လကျဆဈတဈဆဈ ၊ အကွောတဈမြှငျ လိုလညျး အကွောတဈမြှငျ လိုရာဖွတျတောကျယူုပွီး သုံးကွပေါ့။
လူနာတှေ အတှကျ သုံးလို့ရသမြှ အကုနျလုံး ဖွတျတောကျယူပွီးပွီ ဆိုရငျတော့ ကနျြနတေဲ့ ရုပျအလောငျးကို ဂုနျနီအိတျထဲထညျ့ ၊ ကြောကျတုံးတှပေါ ထညျ့ပွီး ပငျလယျထဲ သင်ျဘောနဲ့ သယျသှား ၊ ခပျဝေးဝေး ရောကျတာနဲ့ ရထေဲပဈခပြွီး ငါးစာကြှေးလိုကျ ပါလို့ ဒကာရငျးတှေ ၊ တပညျ့ရငျးကလေးတှကေို သခြောမှာ ထားပါတယျ။
ဘဝ တဈသကျတာမှာ ကိုယျစားခဲ့တဲ့ ငါးတှတေျောတျော မြားခဲ့ပွီ။ ကိုယျ့ကိုလညျး ငါးတှေ တဈလှညျ့ပွနျစား ပါစဦေး။
မီးရှို့၊ ပွာခပြွီး အလကားပြောကျသှားမယျ့ အတူတူ ပငျလယျထဲက ငါးတှစေားရတော့ ငါးတှအေတှကျ အကြိုးရှိ တာပေါ့။ ကိုယျကုသိုလျရဖို့ ရညျရှယျလုပျတာ မဟုတျပမေယျ့ ကိုယျလညျး ကုသိုလျရ သှားတာပဲ ဒါနကုသိုလျ။
ကိုယျသသှေားရငျ ကိုယျမှာ ထားတဲ့ အတိုငျး ကနျြရဈ သူတှေ လုပျမလုပျ မသခြောပမေယျ့ ကိုယျ့စတေနာ၊ကိုယျ့မတ်ေတာကတော့ ဒီအတိုငျးပဲ တဈသကျ မတျတညျး ရှိတဲ့ အတှကျ ဒီကိစ်စကို သတိရ လိုကျတိုငျး ကိုယျကတော့ မသခေငျ ကတညျးက ပုဗ်ဗစတေနာနဲ့ (ရှေ့ဦးစတေနာ၊တငျကွိုစတေနာနဲ့) ကုသိုလျ ရနတေော့တာပါပဲ။
ဂုနျနီအိတျက အပေါကျပါတဲ့ ဂုနျနီအိတျတော့ ဖွဈရမယျ။
ကွကျသှနျ ထညျ့တဲ့ ဂုနျနီအိတျ မြိုးပေါ့။ ဒါမှ ငါးတှေ စားလို့ အဆငျပွမှောလေ။ ဆာလာအိတျတို့ ၊ ပလကျစတဈအိတျတို့ ဆို ငါးတှစေား မရဘဲ ဖွဈနေ လိမျ့မယျ။ အနံ့ရလို့ ထိုးရငျလညျး ပါးစပျတှေ နာနမေယျ။
ဒါ ဦးဇငျးရဲ့ သတေမျးစာ ထဲက အခကျြအလကျ တဈ ခုပေါ့နျော……….
အရှငျဆန်ဒာဓိက (အသလှေတဲ့သူ) တရားစာအုပျမှ ကူးယူေ ဖျာပွ ပါသညျ။
အားလုံးသော မိတျဆှမြေား ကနျြးမာလို့ခမျြးသာ ကွပါစေ။